Ntinye Ngwa: Alọ ahịa zuru ụwa ọnụ maka ngwa GNU / Linux | Site na Linux
Ntinye ngwa: Alọ ahịa zuru ụwa ọnụ maka ngwa GNU / Linux
Tinyekwa App bụ ihe na-adọrọ mmasị nke na-enye anyị ohere ịmekọrịta na gburugburu ebe obibi nke Storelọ ahịa dị n'ịntanetị dị iche iche na bara uru ngwa anyị Sistemụ arụmọrụ na-emeghe ma na-emeghe, dabere na ụdị nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ na nke dị iche iche (Flatpak, Snap na Appimage) dịnụ.
N'ihi ya, Tinyekwa App Ebe ọ bụ na ya kere ya e mere dị ka ngwa ahịa n'ike mmụọ nsọ site ochie online ọrụ nke Applọ Ahịa Linux (https://linuxappstore.io/) nke ahụ anaghịzi arụ ọrụ. Ọzọkwa, ya mfe na enyi na enyi interface-enye gị ohere mfe chọọ, ibudata ma wụnye ngwa na-agba ọsọ na ọtụtụ nkesa nke GNU / Linux.
Tinyekwa App bụ ngwa dị mma nke na-enye anyị ohere ugbu a, iji zere ịga na / ma ọ bụ iji Storelọ Ahịa Web nke ngwa dị n'ịntanetị, dị ka:
Craftlọ ahịa Snapcraft
Na ndị ọzọ mara, yiri nnọọ, dịka:
Nke ahụ na-arụ ọrụ site na ịwụnye dị iche iche ngwa ma ọ bụ tinye-ons site na ngwa OCS-Url. Mgbe e mesịrị, anyị ga-ekwu okwu banyere ụlọ ahịa ndị ọzọ a wee kwuo ngwa OCS-Url.
1 Ntinye Ngwa: Alọ ahịa zuru ụwa ọnụ maka ngwa
Ntinye Ngwa: Alọ ahịa zuru ụwa ọnụ maka ngwa
Ka ibudata Tinyekwa App anyị ga-agakwuru nke ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ma budata ya na usoro nke masịrị anyị ma ọ bụ mkpa anyị. Ugbu a ọ dị na usoro nrụnye ndị a:
.ihe omume (68.2 MB)
Maka ọmụmụ ihe anyị, anyị ga-ebudata ngwugwu na .deb usoro maka nkwụnye ọnụ.
Ozugbo ebudatara ngwugwu ahụ na .deb usoro anyị gaba iji wụnye ya site na iji ọnụ iwu "dpkg", dị ka ndị a:
Ozugbo arụnyere, enwere ike igbu ya site na iji ụzọ mkpirisi emepụtara na menu «ngwa mma». Ma ọ bụ site na ọnụ site na-agba ọsọ ahụ iwu "ngwa-tinyekwa". Ọ bụrụ na anaghị egbu ya na ụzọ mbụ, enwere ike ịme ya n'ụzọ nke abụọ iji hụ ụdị mmejọ nke ọnụ na-egosi anyị.
Ee site na ịgbaso iwu:
E gosipụtara ozi ezighi ezi:
Gbalịa mee iwu ndị a:
Wee weghachite iwu ozugbo:
Ọ bụrụ na emee ya n'ụzọ ziri ezi site na ọnụ, a ga-egbu ya n'ụzọ ziri ezi na menu. Iwu iwu sudo sysctl kernel.unprivileged_userns_clone=1 A gha aghaghi igbu ya tupu eme ya, belụsọ ma etinyere ya na edemede ma ọ bụ ndokwa ọrụ na mbido (mmalite) nke Usoro njikwa.
Ozugbo emere ma bido n'enweghi nsogbu Tinyekwa App na-egosi anyị windo nwere ihe ndị a:
Chọọ mmanya: Chọta ngwa ndị edenyere aha site na itinye usoro ọchụchọ yana aha ma ọ bụ nkọwa ya.
Menu: Ọ nwere nhọrọ 4 bụ Homelọ, Otu, Ntọala ma tinye aka.
Ngwa panel: Nke ahụ na-egosi ahịrị 3 a na-akpọ Ngwa eji ewu ewu (Ngwa ndị ewu ewu), emelitere nso nso a (Na nso nso a ka emelitere) yana ọhụụ ọhụrụ (Ihe ọhụụ ọhụrụ).
Na nkenke, na Tinyekwa App na-enye anyị ihe dị mma nke ngwa iji mara, wụnye ma nwalee.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere a na-akpali ngwa na-akpọ «App Outlet», nke na-enye anyị ohere ịchịkọta gburugburu ebe obibi Storelọ ahịa dị n'ịntanetị dị iche iche na bara uru ngwa anyị «Sistemas Operativos Libres y Abiertos» dabere na ụdị nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ na nke dị iche iche (Flatpak, Snap na Appimage) dị; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ntinye ngwa: Alọ ahịa zuru ụwa ọnụ maka ngwa GNU / Linux
Ndewo, na nso nso a ka m gbalịrị ịnwale ngwa na ngwa
enwetara m njehie yiri nke ahụ i kwuru na m mechara gaa nwalee ya, amaliteghị m ịchọpụta etu esi edozi nsogbu ahụ.
Gịnị bụ mmejọ a? Achọpụtara m na ọ bụ ihe mgbochi ka m mee nke ahụ iji mee ngwa ahụ. Enweghị ike idozi ya n'ụzọ ọzọ?
Ekele Jony127! Gbalịa mee ihe a ma ọ bụ ngwa ọzọ "/ opt / App Outlet / app-outlet" –no-sandbox% U from a shortcut or terminal like this. Nhọrọ -no-sandbox na-ezere inwe iwu iwu sudo sysctl kernel.unprivileged_userns_clone = 1 mbụ.
Ee, site na nhọrọ ahụ enwere m ike ime ya na-enweghị iji iwu ọ bụla gara aga, ajụjụ m bụ, nke a ọ ga-emebi nchedo usoro ahụ? Aghọtara m na site na iwu ahụ ngwa ahụ na-agba ọsọ na-enweghị iji nchebe sandbox.
N'ezie, ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na mpụga Sandbox, enwere ike igosipụta mwakpo, n'agbanyeghị na echere m na maka onye ọrụ nkịtị yana ọkachasị maka onye ọrụ GNU / Linux, ọ bụ obere ohere, ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume. Maka ndị ọzọ, m ga-aga n’ihu nyocha ihe kpatara ya na azịza ya.
Ekele Jony127! Ọ bụrụ na ị pụtara njehie ejiri usoro akara a dozie:
Mgbe m nyochachara ihe na-agbazi ma ọ bụ etu m si rụọ ya, nke bụ eziokwu bụ na enweghị m ike ịchọpụta nke mbụ na ihe niile m gbalịrị maka nke abụọ abaghị uru. Ihe obula, olile anya na ndi ozo n’enye anyi ihe n’enye anyi ihe.
Ebumnuche emere iji mee ka ọrụ dị n'otu n'etiti OpenSUSE Leap na SUSE Linux Enterprise
Mbugharị mbugharị site n'aka otu n'ime ndị na - ekenye ya nsogbu maka nsogbu ha na - eche ihu ugbu a